Sonic အဆိုပါ Hedgehog2ဂန္ထဝင် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sonic အဆိုပါ Hedgehog2Classic
Sonic အဆိုပါ Hedgehog2ဂန္ထဝင် APK ကို
အားလုံးအချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးရောင်း SEGA ဂိမ်းတစ်ခုမှာ - Sonic အဆိုပါ Hedgehog2မိုဘိုင်းအပေါ်ယခုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါ! SEGA ရဲ့စူပါ Sonic လက်ရာပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်!
ဒေါက်တာ Eggman သည်သူ၏အဆုံးစွန်သောလက်နက်တို့သည်မရဏဥဖြည့်စွက်ဖို့သူ့ကို enable လိမ့်မည်ဟုထိုခုနစ်ယောက်တို့သည် Chaos Emerald ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေပြန်သည်သူ၏ဟောင်းနွမ်းလှည့်ကွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Sonic, Tails နှင့်လက်၏သုံးဆခြိမ်းခြောက်မှုသာလျှင် Sonic Mania ကိုနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ကနေဒီ remaster အတွက်သူ့ကိုအနိုင်ယူနိုင်သည်!
Sonic အဆိုပါ Hedgehog2'' ထာဝစဉ် SEGA '' ၏အစဉ်အဆက်-တိုးပွားလာလိုင်း-up, ပူးပေါင်းမည်အခမဲ့ SEGA console ကိုဂန္တစ်ဦးရတနာသိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမိုဘိုင်းပေါ်တွင်ဘဝမှယူဆောင်!
- ရေအောက်တွင်းထဲကနေနီယွန်-lit ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှကျွမ်းကျင်ဖို့ဆယျ့နှစျ Badnik ကာပိုးဇုန်,!
- ထိုအချိန်တိုက်ခိုက်မှု mode ကို, နှင့် All-သစ်ကိုသူဌေးကတိုက်ခိုက် mode ကိုအပေါ်ကိုယူ, အွန်လိုင်းယှဉ်ပြိုင်!
- မူရင်းဖြန့်ချိသို့လုပ်မပြုခဲ့သောလျှို့ဝှက်ချက်က Hidden နန်းတော်ဇုန်ဇာတ်စင် Play!
- ထိုခွောကျတတျသော mecha Sonic အပါအဝင်ဒေါက်တာ Eggman ရဲ့ဖန်တီးမှု Fight
- စူပါ Sonic နှင့်စူပါလက်အသွင်ပြောင်းဖို့အားလုံးကို Chaos Emerald ရယူပါ!
"သံသယမရှိဘဲ, ကအစဉ်အဆက် SEGA ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းပါပဲ။ " [96%] - စတူးဝပ် Clarke, Mega ဇုန် #25 (ဒီဇင်ဘာလ 1992)
"မြန်, မူရင်းထက်အများကြီးအခိုင်အမာ, ခြောမှေ့, ပို သာ. , ရောင်စုံပိုကြီးနှင့်အများကြီး။ " [96%] - ဂျူလီယန် "Jaz" Rignall ဆိုလိုစက်များ SEGA #2 (နိုဝင်ဘာလ 1992)
"တစ်တန်ပိုပြီး Bluey ရဲ့ပထမဦးဆုံး outing ထက်လာကြတယ် pack မှာ။ " [94%] - ရှင်ပေါလု Anglin, ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် & ဗီဒီယိုဂိမ်းများ #132 (နိုဝင်ဘာလ 1992)
Sonic THE Hedgehog2အသေးအဖွဲ
- ဤမြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်, 2FPS အရေးယူမှုနှင့် remastered တေးသံနှင့်အတူပြည့်စုံ, ယနေ့အထိ Sonic အဆိုပါ Hedgehog 60 ၏အရှိဆုံးပြည့်စုံဗားရှင်းပါ!
- ဤလည် Dash ပြောင်းရွှေ့ feature မှပထမဦးဆုံး Sonic ဂိမ်းခဲ့သည်
- အဆိုပါမာစတာစနစ်ဗားရှင်းသူအားဖွင့ ်. မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးဂိမ်း Tails, ထင်ရှားခဲ့သည်!
- ထို Mega Drive ကို / ကမ်ဘာဦးကမူရင်းမတူဘဲ, သငျသညျယခု Tails အဖြစ်ပျံသန်းနိုင်သည်!
Sonic THE Hedgehog2နောက်ခံ
- ဒီဂိမ်းကိုမူလကနိုဝင်ဘာလတွင် 1992 အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ချိခဲ့သည်
- မူရင်း developer: Sonic ရေးအဖွဲ့ & SEGA နည်းပညာအင်စတီကျု
- ဒီဇိုင်နာ: ဟီရိုကာ Yasuhara
- ခဲ Composer: Masato Nakamura
© SEGA ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ SEGA, အ SEGA လိုဂို, Sonic အဆိုပါ Hedgehog 2, SEGA ထာဝစဉ်ကို၎င်း, SEGA ထာဝစဉ်လိုဂို SEGA Holdings က Co. , Ltd သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
67.18 ကို MB
စူပါ Bino Go ကို - ...